I-D&D | I-Long Term Resident Apartment
Pokhara, Western Development Region, i-Nepal
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Indra
2 recent guests complimented Indra for outstanding hospitality.
Ifulethi lethu litholakala imizuzu eyi-10 nje ukuhamba ibanga ukusuka endaweni yezivakashi iLakeside namamitha angama-30 ngaphakathi komgwaqo omkhulu.Lesi sikhala siyindawo evumelanayo futhi enokuthula yedolobha lasePokhara. I-International Medicare Center kanye nesitolo soMnyango we-Sulav ziqhele ngamamitha ayi-10 kanye namamitha angama-30 ngokulandelana ukusuka efulethini lethu. Isivakashi singabamba imoto yomphakathi ngemva kokuhamba umzuzu owodwa sibheke engxenyeni esenyakatho. Siyawahlonipha amasiko asentshonalanga ngoba sinebhizinisi emkhakheni we-hospitality isikhathi eside.
Lesi sikhala siqukethe izinto zesimanje kanye nefenisha. Isakhiwo sisanda kwakhiwa futhi isikhungo sisezingeni eliphezulu, esingcono kakhulu ukuhlala isikhathi eside.
a) 1bhk inekhishi eli-1 elibanzi elinefenisha ngokugcwele kanye negumbi lokulala eli-1 elibanzi elinombhede othokomele.
b) lapho ungaphumuza umzimba wakho okhathele.
c) Uzohlinzekwa: zonke izinto zasekhishini nezinto zokusebenza.
d) Amanzi ashisayo amahora angama-24 ayatholakala nge-inthanethi yamahhala yejubane eliphezulu.
Okuwukuphela kwento okufanele uyenze ukusibhukha futhi sizokuthathela konke ukukhathazeka kwakho.
Ifulethi lethu lisendaweni yezivakashi lapho kuhlala khona ikhofi, isitolo somnyango kanye nesikhungo sezokwelapha eduze kakhulu.
Itholakala eduze kwechibi indawo yezokuvakasha ye-pokhara, ukuze ukwazi ukufinyelela indawo yokubhaka, isitolo sekhofi, izindawo zokudlela, izindawo zokucima ukoma, i-ejensi, isibhedlela, ikhemisi, izinsiza kalula.
Ngizobe ngikhona ukuze ngikubingelele futhi ngikweseke kukho konke ukuhlala kwakho.
Ngingakwazi ukuqondisa isivakashi sami ngesikhathi esikhululekile futhi sabelane ngolwazi lwamasiko namasiko ezwe lethu .Singakwazi ukuphuza itiye ngezinye izikhathi ndawonye noma senze eminye imisebenzi ndawonye, ungazise ngakho .
Ngingakwazi ukuqondisa isivakashi sami ngesikhathi esikhululekile futhi sabelane ngolwazi l…